Fepetran'ny fitsangatsanganana Thailand: Inona no antenaintsika manaraka?
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Fepetran'ny fitsangatsanganana Thailand: Inona no antenaintsika manaraka?
Airlines • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao Mafana India • Vaovao • Safety • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Teo am-piandohan'ny areti-mifindra coronavirus dia azoko antoka fa handeha irery indray ny olona raha mahatsapa izy ireo fa azo antoka ny manao izany ao amin'ny tontolo Covid-19 vaovao, ary rehefa manana ny vola tsy manam-bola hanaovana izany izy ireo. Ny faharesen-dahatra azoko tamin'io mantra io dia mafy orina ankehitriny toy ny tamin'ny volana lasa izay.
Raha i Thailand androany dia heverina ho azo antoka kokoa, tsy misy areti-mifindra vaovao ao an-toerana tato anatin'ny 4 herinandro - ahoana ny amin'ny sisa amin'ny tany? Tamin'iny faran'ny herinandro farany iny no nahatratrarana tsangambato vaovao - tranga maherin'ny 10 tapitrisa sy 500,000 no maty eran'izao tontolo izao - toa tsy hita popoka ny ankamaroan'ny vinavina. Tsy mihoatra izany noho ny any Etazonia.
Miaraka amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ireo tranga coronavirus rehetra sy maty manerantany ao anatin'ny fari-taniny - tranga 2,510,000 isan'izany ny tranga vaovao 44,000 isan'andro ary 125,000 ny maty - Etazonia no ratsy indrindra.
Niala tsiny aho tamin'ny famakiana tamin'ny alàlan'ny BBC fa any India, i Delhi izao no faritra voa mafy indrindra amin'ny firenena, miaraka amin'ny tranga 73,000 voarakitra an-tsoratra Covid-19 ary farafahakeliny 2,500 no maty.
Nisedra olana maro i Delhi, ao anatin'izany ny governemanta faritany sy faritra isam-paritany tsy mifankahazo izay tsy nahita maso maso sy vahoaka tsy dia naniry hanaraka ny torolàlana momba ny fahadiovana sy ny fanalavirana ny fiaraha-monina. Izy io koa dia fanjakana manana sisintany maro izay manahirana ny fifehezana.
Ho an'i Thailandy dia tsara tantana izahay. Tsy nisy tranga na fahafatesan'ny coronavirus vaovao nitatitra nandritra ny fotoana ela namela ny totalin'ny tranga 3,162 ary 58 ny maty hatramin'ny volana Janoary. Tsy misy aretina vaovao eo an-toerana mandritra ny 31 andro, ary tsy misy maty vaovao.
Hentitra tokoa izahay, miaraka amin'ny governemanta Thai matanjaka amin'ny fifehezana, ary fanarahan-dalàna tsara avy amin'ny olom-pireneny na dia mandritra ny ora tsy azo atao aza, rehefa natao izany.
Zava-dehibe amin'i Thailand ny zava-mitranga erak'izao tontolo izao. Tsy maintsy mipetraka isika ary mahita izany. NAHOANA?
Na tiana na tsy tiana dia mifamatotra be. Miaraka amin'ny tranga 10 tapitrisa eran'izao tontolo izao dia olona 1.5 ao anatin'ny 100 no voan'ny virus coronavirus MAFY ary misy ny tatitra milaza fa avo kokoa izany. Raha tsy voafehy manerantany i Covid-19 dia voakasik'izany isika rehetra.
RESPONSIBLE ve ny manokatra ny sisintanintsika sy ny seranam-piaramanidintsika any Thailandy amin'ireo mpitsidika erak'izao tontolo izao raha mbola mahita toerana mafana sy fahafatesan'ny coronavirus ireo firenena any Eropa, Amerika, Afovoany Atsinanana ary Azia? Amin'ny maha olona mampiasa vola be amin'ny fandraisana vahiny sy fizahan-tany dia tsy sahy aho, saingy mila milaza ENY fa tsy tompon'andraikitra izany.
Raha izaho no PM Thai dia inona no ho valiko? Mihevitra aho fa tsy mila tsipelina azy io.
Amin'ny herinandro ambony dia antenaina hanao fanambarana lehibe i Thailand. Ny Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA) dia hampahafantatra amin'ny alatsinainy ny antsipiriany momba ny fanalefahana ny fetra 5, nanomboka ny voalohan'ny volana Jolay. Ankoatry ny mpifanila vodirindrina amintsika dia tsy hitako fa tandindonin'ny governemanta ny asa tsara rehetra tao anatin'ny 95 andro lasa izay hatramin'ny State of Emergency tany Thailand dia nambara tamin'ny 26 martsa 2020. Raha ny faniriako dia tsy izany - ho an'ny asa fivezivezena sy fizahan-tany - ny PM Thai dia tsy hiloka hanokatra sisin-tany sy seranam-piaramanidina tanteraka. Fihetsika mety hampidi-doza toy izany.
Nampahery ahy ny filohan'ny Vaomiera eropeana Ursula von der Leyen rehefa niresaka momba ny fanaovana vaksiny dia nanambara izy fa hanao izay fara heriny ny Vondrona Eropeana mba hahazoana antoka fa hanana vaksininy ny olona rehetra eto amin'ity tontolo ity, IRRESPECTIVE amin'ny toerana onenan'izy ireo. Nilaza koa izy fa tsy maintsy vonona hamokatra sy hametraka vaksinina toy izany manerana an'i Eropa sy izao tontolo izao isika. Indrindra amin'ireo firenena mahantra. NAHOANA?
Satria izy koa mahalala ny fifandraisantsika. Mifandray daholo isika REHETRA. Tsy misy olona nosy ary isika rehetra dia tokony handray ny anjarantsika mba hiarovana ny tontolontsika iray, olona iray isika. Mifandray daholo isika rehetra.
Te-hiteny aho fa ny dia dia azo antoka, saingy avelao aho hilaza hoe:
Mijanona ho azo antoka, mahasalama hatrany.
Andrew J Wood, izay mpifanoratra amin'ny eTN ary filohan'ny SKAL avy any Bangkok, Thailand